​ Dadka waaeeyn waxeey Iswiidhan kuu lee yihin fursado-waxbarasho oo kala duwan.
Af-iswiidhishka loogu talagalay ajnebiga, sfi, waxa weeye barasho asaasi ah ee afka iswiidhishka oo loogu tala galay dadka waaweyn oo uusan iswiidhishku ahayn afkooda koowaad. Waxaad sfi dhigan kartaa saacado buuxa ama saacado yar. Waxbarashadu waa lacag la’aan.
Waxaad xaq uu lee dahay in aad waxbrashada afiswiidhishka loogu tala galay ajnibga, ka qeeyb qaadatid laga bilabaa sanadka aad gaareeysid 16 sano. Laakin inta badanaa dadka ka hooseeyo 20 sano waxeey badalkiisa afka iswiidhka ku bartaan dugsiga sare. Markii aad codsaneeysid sfi , waxaad wadaneeysaa waraqaada cadeeynta shakhsiga (personbevis) oo laga keeno Hey'adda canshuuraha iyo kaarkaada-aqoonsiga, liisin ama baasaboor.
Sido kale waxaa jirto waxbarasha dadka waaweeyn ee loogu tala oo wax uu dhiman yihiin ama qabo carqalade kale ee dhanka maskaxda ah. Waxbarashada nuucaas ah waxaa lagu magacaaba särvux.
Dugsiyada waxbarashada bulshadu ayaa go’aan ka gaaraya qofka halkaa wax ku baranaya. Dugsiyada waxbarashada bulshadu waxay leeyihiin nidaam shahaado oo u gaar ah. Waxbarashada dugsiyadaan waxay ku siinayaan waxbarasho asaasi ah oo aad ku bilowdo jaamacadaha. Taas micneheedu waa in aad ka heleyso aqoonta aad u baahan tahay si aad wax ugu barato jaamicadaha.
Waxbarashada lagu dhigo dugsiyada xirfadeed ee heer jaamacadeedka ah waxeey xariir dhow la lee yihiin suuqa shaqada. Ula jeedada laga lee yahay waa si uu ardaya dhaqso shaqo ugu helo markuu dhameeysto waxbarashada. Qeeybo ka mid ah waxbarashooyinka xirfadeed ee heer jaamacadeedka, waxeey soo bandhigaan iswiidhishka oo ku jiheeysan xirfad shaqo oo leh taageero dheeraad ah. Waa taageero loo fidinaayo qofka aan af iswiidhish uu aheeyn afkiisa hooyo. Haddii aad dooneyso in aad wax dheeraad ah ka ogaato waxbarashooyinka xirfadeed, la xiriir Hay’adda waxbarashada xirfadeed ee jaamacadaha www.myh.se
Dhisamaha Jaamacada Göteborg.
Masawirqaade: Matilda Karlsson
Haddii aad dhiganeyso ugu yaraan waxbarasho saacado gaaban, boqolkiiba 50, waxaad xaq uu lee dahay in aad codsato lacagta kaalmada ardyda ama lacagta deeynta ardayda oo laga codsado Hay’adda kaalmada dhaqaale ee ardayda, (CSN).
Waxaad warbixin dheeraad ah oo ku saabsan waxbarashada jaamacadaha, kuna qoran afafka kala duwan ka akhrisan kartaa bogga internetka: www.studera.nu
Haddii aad dooneeyso warbixin dheeraad ah oo ku saabsan nidaamka codsiga jaamacadaha waxaad ka akhrsian kartaa bogga internetka: www.antagning.se
Haddii aad haysato shahaado waxbarasho sare aad dibada kala timid, waxaa waxbarashadaada kuu qiimayn kara guddiga jaamacada iyo waxbarashooyinka sare (Universitets- och högskolerådet). Qiimeynta waa lacag la'an. In dheeraad ah ka akhriso bogga internetka: www.uhr.se
Qofka ku jiro boroseeska magangelyo dalabka ah xaq uma laha in CSN eey kaalmo siiso. Warbixin dheeraa dah waxaa laga heleyaa: www.csn.se